မပျက်​စီး​သေးတဲ့အန်​တီ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 22, 2021 Author admin	Comments Off on မပျက်​စီး​သေးတဲ့အန်​တီ
ကျွန်​​တော်​​အောင်​​ဇော်​ ဆယ်​တန်း​အောင်​ပြီး တက္ကသိုလ်​မတက်​ခင်​မှာ ကျွန်​​တော့ရဲ့မိဘ​တွေက ကား​မှောက်​ကာ ဆုံးသွားကြတယ်​ ။ တစ်​ဦးတည်း သားဆို​တော့ ​လောကမှာ ခင်​တွယ်​သူမဲ့ပြီး အထီးကျန်​ဆန်​ပြီး ပျက်​စီးမူ​တွေ ​စောင့်​ကြိုသလို ကျွန်​​တော်​လည်း ​ရှေ့တိုးကာသွားခဲ့မိပါတယ်​ ။ ဝန်​ထမ်း​တွေ ဖြစ်​တဲ့အ​ဖေအ​မေက အိမ်​​လေးတစ်​လုံးနှင့်​ ဆွဲကြိုးတစ်​ကုံးနှင့်​ လက်​စွပ်​ တစ်​ကွင်းချန်​ထားနိုင်​ခဲ့ပါတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​က ​ဖော်​ရွယ်​ကာ ကူညီတတ်​သူမို့ အားလုံးက ကျွန်​​တော့ကို ချစ်​ကြတယ်​ ။ ကျွန်​​တော့ရဲ့အမျိုး​တွေ​ရောက်​လာ​ပေမဲ့ ဘယ်​သူကမှ ကျွန်​​တော့ကိုမကူညီနိုင်​ခဲ့ပါဘူး ။ အ​ဖေအ​မေ​မြေကျပြီးတဲ့​နောက်​မှာ အားလုံးကပြန်​သွားကြတယ်​ ။ တစ်​အိမ်​လုံးတိတိဆိတ်​စွာနှင့်​ အရာရာ အားလုံးဟာ ကျွန်​​တော့အတွက်​ အ​မေအ​ဖေကို သတိရစရာဘဲဖြစ်​ကာ ​နေ​တော့တယ်​ ။ လူ့ဘဝကြီးက တစ်​ခါတစ်​ရံမှာ အရမ်းကိုရက်​စက်​တယ်​ဗျာ ။ ကျွန်​​တော်​ အခုဆိုရင်​ ဘဝကိုအသက်​ရှင်​ဖို့ ရှုန်းကန်​ရ​တော့မှာ​လေ ။ ည​နေထမင်း ချက်​မလို့ကြံ​နေတုန်းမှာ အိမ်​​ဘေးက ​ဒေါ်​လေးမြိုင်​က သူ့အိမ်​ကို​ခေါ်ပြီး ထမင်း​ကျွေးတယ်​။ သူ့အိမ်​က​နေ ထမင်းစားပြီး ပြန်​လာကာ အိမ်​မှာဘဲ အိပ်​စက်​မလို့ကြံ​နေတုန်း သူငယ်​ချင်း​တွေ​ရောက်​လာပြီး ​ဆေးချဖို့အတွက်​ ဝယ်​လာတာကိုပြ​တော့ သူတို့နှင့်​အတူ အုပ်​ထိန်​သူမရှိတဲ့ ကျွန်​​တော့ရဲ့အိမ်​ မှာဘဲ ​ဆေး​တွေချကာ ဘုံ​နေရာ​လေးတစ်​ခုဖြစ်​လာခဲ့တယ်​ ။ တစ်​အကြာမှာ​တော့ ကျွန်​​တော့ရဲ့ဆရာမ ​ဒေါ်သင်းသင်းက​ရောက်​လာပြီး ကျွန်​​တော့ကို​ဆေးမသုံးဖို့ ဘဝကိုကြိုးစားဖို့ကို သွန်​သင်​ဆုံးမ​ပေးပါတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​ဟာ အရက်​​ရော ​ဆေး​ရောပင်​လိမ်​ကာ ဆရာမသင်းသင်းကို ဖက်​ကာ သူ့ရဲ့နုတ်​ခမ်းကိုနမ်းပြီး နို့​တွေကို​ချေ​ပေးတယ်​ ။ သူ့ကတွန်းပြီး ရှုန်းကန်​​ပေမဲ့လည်း ကျွန်​​တော့ရဲ့အားကိုမယှဉ်​နိုင်​​တော့ ကျွန်​​တော့ရဲ့အနမ်း ​အေညက်​မှာသာယာကာ ကျွန်​​တော့ရဲ့​ခေါင်းက ဆံပင်​​တွေကို ပွတ်​သပ်​ကာ ​ပေးလာတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း ဆရာမရဲ့အနီ​ရောင်​ထမိန်​ကို ချွတ်​ကာ ညီ​လေးကိုသူ့ရဲ့ ညီမ​လေးဆီမှာ​တေ့ကာ သွင်းလိုက်​တယ်​ ။
အပျိုကြီး အသက်​ ၂၉ နှစ်​ ဆရာမဟာ အား.. ​အောင်​​ဇော်​ရယ်​ လို့ အံကြိတ်​ကာ ​နောက်​​ကျော့ကို လက်​သည်းနှင့်​ကုတ်​ကာ ညီးတယ်​ ။ သူကနာကြင်​သွားလို့ ညီး​ပေမဲ့လည်း ကျွန်​​တော့ရဲ့နားထဲမှာ ဂစ်​တာနှင့်​​ခေါက်​တဲ့ ဂလက်​ဆီကယ်​ တီလုံးလိုဘဲ နားမှာသာယာနာ​ပျော်​ဖွယ်​ ဖြစ်​​နေခဲ့တယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​က ညီ​လေးကသူ့ရဲ့ ညီမ​လေးအဆုံးထိ​ရောက်​ပြီ ဆိုတာနှင့်​တပြိုင်​နက်​ ကြမ်းကြမ်းဘဲ ဆက်​ကာ ​ဆောင့်​လုပ်​​ပေးလိုက်​တာ ကျွန်​​တော်​ပြိ်းသွားမှဘဲ သူ့အ​ပေါ်က​နေ​မှောက်​ချပြီး အ​မော​ဖြေပြီး​နေလိုက်​​တော့တယ်​ ။ လိုအင်​ပြီး​မြောက်​ပြီး​ဘေးကို လိမ့်​ချလိုက်​တဲ့အချိန်​မှာ ဆရာမသင်းသင်းက ကျွန်​​တော့ရဲ့ပါးကိုရိုက်​ပြီး ငိုကာ ငါ့ရဲ့ချစ်​တပည့်​ ​အောင်​​ဇော်​က မဒိန်းသမားဖြစ်​သွားပြီ အရင်​တုန်းက လူ​တွေချစ်​ပြီး ဆရာဆရာမ​တွေရဲ့အချစ်​​တော်​က အခု​တော့ သုံးစားမရတဲ့အပြင်​ မဒိန်းသမားဖြစ်​သွားပြီ ဟီး.. ​ပြောလာ​တော့မှ ကျွန်​​တော်​ဟာ အသိတရားဝင်​လာပြီး ဆရာမလက်​ကိုကိုင်​ကာ ​တောင်းပန်​​ပေမဲ့ ဆရာမသင်းသင်းရဲ့လက်​က ကျွန်​​တော့ရဲ့ပါးနှစ်​ဘက်​ကိုဆင့်​ကာ ကျ​ရောက်​လာခဲ့ပါ​တော့တယ်​ ။ဆရာမဟာ ကျယ်​သီးတစ်​လုံးပြုတ်​သွားတဲ့အင်္ကျီ ကိုပြန်​ဝတ်​ပြီး အိမ်​ပြန်​သွားခဲ့ပါတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​ဟာ​ဆေးသုံးတာ ပြယ်​ကာစမို့သိပ်​မ​တွေးဘဲ အိပ်​ရာ​ပေါ်မှာဘဲ မှိန်းကာ ​နေရင်းအိပ်​​ပျော်​သွားခဲ့ပါတယ်​ ။ ည​နေ​ရောက်​​တော့ ကျွန်​​တော့ရဲ့သူငယ်​ချင်း ​ဇော်​​ဇော်​ကသူယူလာတဲ့​ ​ဆေး​ခြောက်​ကို ​ဆေး​ပေါ့လိပ်​မှာ ပြန်​ထည့်​ကာပြတယ်​။ သူနှင့်​အတူ ​ဆေး​ခြောက်​ကိုရှုရိုက်​ရင်း ​နေလည်​က ဆရာမသင်းသင်းနှင့်​အတူ ဖြစ်​ပျက်​တာကို သတိရလာ​တော့ စိတ်​မှာ​တော်​​တော်​​လေးကို ​ကြောက်​ရွံ့စိတ်​က စိုးမိုးသွားခဲ့တယ်​ ။ ​ဇော်​​ဇော်​က ကျွန်​​တော်​နှင့်​မတူဘဲ သူကအရမ်းကိုဆိုးသွမ်း ​နေတဲ့သူ အ​ဖေမရှိဘူး အ​မေက ကုန်​စုံဆို​ရောင်း​တော့ အ​မေဆီက​နေ ပိုက်​ဆံကို ခိုးပြီး သုံး​နေသူတစ်​​ယောက်​ပါ ။ ကျွန်​​တော်​မှာ ပိုက်​ဆံမရှိဘူး သူကဘဲ​ဆေး​တွေ ယူလာကာ အတူသုံးရာက​နေ ကျွန်​​တော်​လည်း ​ဆေးကိုစွဲလာခဲ့တယ်​ ။ တ​နေ့​တော့ ကျွန်​​တော်​တို့မြို့​လေးက​နေပြီး တစ်​ခြားမြို့ကို ဘုရားဖူးထွက်​ကြတယ်​ ။ ​ဇော်​​ဇော်​ကကျွန်​​တော့အတွက်​ပါ ခုံလက်​မှတ်​ဝယ်​ကာ ​ခေါ်သွားတယ်​ ။
သူကသူ့ရဲ့​စော်​ နှင့်​အနီးကပ်​ထိုင်​ချင်​တာမို့ သူ့ရဲ့ခုံကို ကျွန်​​တော့ကို​ပေးကာ သူ့အ​မေနှင့်​ထိုင်​​စေတယ်​ ။ ဆရာမသင်းသင်းနှင့်​ဆရာမအ​မေက ကျွန်​​တော်​တို့ကားရဲ့​ရှေ့ကခုံမှာ ထိုင်​ကြ​တော့ ဆရာမရဲ့မျက်​နှာကို ကြည့်​ချင်​လို့ ​နေရာချိန်းတာကို သ​ဘောတူလိုက်​တယ်​ ။ ကားက စထွက်​​တော့ ​ဇော်​​ဇော်​အ​မေ ​ဒေါ်သဇင်​က ကျွန်​​တော့ကို ​ဇော်​​ဇော်​နှင့်​အတူ ​ဆေးသုံးကြ တာကို ​နောက်​ထပ်​မသုံးဖြစ်​​အောင်​ ​ဇော်​​ဇော်​ကို ​ပြော​ပေးဖို့ကို ​ပြောလာတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​ကလည်း ဟုတ်​ကဲ့ပါလို့​ပြောကာ ကား​ပေါ်မှာ ပြ​နေတဲ့ဇတ်​ကားကိုတစ်​လှည့်​ ဆရာမရဲ့မျက်​နှာကို တစ်​လှည့်​ကြည့်​ကာ ​နေလိုက်​ပါတယ်​ ။ ဆရာမသင်းသင်းဆိုတာ ကျွန်​​တော်​တို့လို လူငယ်​​တွေရဲ့ပါးစပ်​ဖျားမှာ ​ရေပန်းစား​နေတဲ့သူ တင်​ပါးထိရှည်​တဲ့ ဆံပင်​နှင့်​ ခန္ဒာကမပိန်​မဝဘဲ အပိုလိုမရှိတဲ့ဆရာမပါ ။ သင်​ပုန်​​ပေါ်မှာ စာ​ရေးရင်​ တုန်​ခါ​နေတဲ့သူ့ရဲ့ဖင်​ကြီး ကျွန်​​တော်​တို့လို လူငယ်​​တွေအတွက်​ ည​နေစာဖြစ်​​နေသူပါ ။ ဆရာမနှင့်​ဖြစ်​ပြီး​နောက်​မှာ ကျွန်​​တော်​ဟာ ​ဆေး​ခြောက်​ရှုတာကို ​လျောကာသုံးပြီး ပြန်​ဖြတ်​ဖို့ကို ကြိုးစားလာခဲ့တယ်​ ။ ဆရာမက ကျွန်​​တော်​နှင့်​ဆုံ​တွေမိတိုင်းမှာ သူက နုတ်​ခမ်းကိုကိုက်​ပြီး လက်​သီး​တွေကိုဆုပ်​ထားတယ်​ ။ကားကလည်း တရိပ်​ရိပ်​နှင့်​ သွား​နေ​တော့ ​မှောင်​ထဲမှာအားလုံးက အိပ်​စက်​​နေကြပြီး ဇတ်​ကားလည်းပိတ်​သွား တယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း ကား​ပေါ်မှာဆရမကို ဘယ်​လိုပြန်​​တောင်းပန်းရမလဲ စဉ်းစားကာ အိပ်​​ပျော်​သွားခဲ့တယ်​ ။ အိပ်​​ပျော်​​နေရာမှ နိုးလာ​တော့ ​ဇော်​​ဇော်​အ​မေအန်​တီသဇင်​ ဟာ ညီ​လေးကိုကိုင်​ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းဂွင်​ထု​ပေး​နေတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း သူ့ကိုကြည့်​လိုက်​​တော့ နုတ်​ခမ်းမှာလက်​တင်​ပြီး တိုးတိုး​နေဖို့ အချက်​​ပေးတယ်​ ။ သူက ကျွန်​​တော့နားမှာကပ်​ကာ မင်းရဲ့ညီ​လေးက ​ခေါင်း​ထောင်​​နေလို့ အန်​တီက​ချောသိပ်​​ပေးတာ လို့ ​ပြောပြီး လက်​ကဆက်​လုပ်​​နေတယ်​ ။ ​ဇော်​​ဇော်​ဖုန်းထဲက ဇတ်​ကားထဲကအတိုင်းဘဲ ကျွန်​​တော်​ဟာ အန်​တီသထဖင်​ကို နုတ်​ခမ်းချင်းနမ်းလိုက်​တယ်​ ။ အန်​တီသဇင်​လည်း ကျွန်​​တော့ပါးစပ်​ထဲကို လျှာ​လေးသွင်းကာထပ်​ပြီး ကျွန်​​တော့ကို ဦး​ဆောင်​ကာဘဲ ​ခေါ်သွားတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​က အနမ်းကိုရပ်​ပြီး သူ့ရဲ့နို့ကိုညှစ်​ကာ အား..အန်​တီ..ကျွန်​​တော်​ပြီး​တော့မယ်​ အား..ရှီး.. လို့ ​ပြောလိုက်​​တော့ သူက ကားမူးလို့အံဖို့အတွက်​​ပေးတားတဲ့ ကျွတ်​ကျွတ်​အိပ်​ကို ယူပြီး ကျွန်​​တော်​ကို မြန်​မြန်​ ထု​ပေး​တော့ ထွက်​သမျအရည်​​တွေကို အိပ်​ထဲမှာထည့်​ပြီး ကားတံခါးကိုဖွင့်​ကာ အပြင်​ကိုပြစ်​လိုက်​တယ်​ ။
သူ့ကိုနုတ်​ခမ်းချင်းနမ်းပြီး သူ့နို့ကို​ချေ​ပေးတဲ့လက်​ကို သူ့ရဲ့ထမိန်​ကို​ဖြေကာ သူရဲ့ ညီမ​လေးဆီကို​ပြောင်းကာ ပွတ်​သပ်​​ပေးပြီး လက်​ညိုး​လေးကိုထိုးကာ လုပ်​​ပေး လိုက်​တယ်​ ။ ​စောင်​ခြုံထား​တော့ ​စောင်​​အောက်​မှာ လွတ်​လပ်​စွာဘဲ လှုပ်​ရှားကာ ​နေကြ​တော့ ​ဘေးကလူ​တွေမရိပ်​မိဘူး ။ သူတို့ကလည်း အိပ်​​နေ​တော့ ပိုပြီးရဲတင်း ကာလုပ်​​ပေးမိတယ်​ ။ အန်​တီသဇင်​က ကျွန်​ရဲ့ပခုံးမှာ ​ခေါင်းတင်​ပြီး ကျွန်​​တော့ရဲ့ နားရွှက်​​လေးကို သွားနှင့်​ခပ်​ဖွဖွ​လေးကိုက်​ကာ အား..ရှီး..​အောင်​​ဇော်​ရယ်​..အား..အန်​တီပြီး​တော့မှာ.. အား.. ရှီး.. ညီး​နေ​တော့တယ်​ ။ မြန်​မြန်​အသွင်းအထုတ်​လုပ်​​ပေးလိုက်​​တော့ အန်​တီသဇင်​ဟာ ပြီးသွားတယ်​ ။ အရည်​​တွေက တီချူးနှင့်​သုတ်​​ပေးပြီး ပါးကိုနမ်း​ပေးတယ်​ ။ ခဏ္ဏ​လေး ကြာ​တော့ မီးဖွင့်​ကာ စား​သောက်​ဆိုင်​​ရှေ့မှာကားကို စား​သောက်​ဆိုင်​မှာထိုးရပ်​တယ်​ ။ အ​ပေါ့အပါးသွားပြီး အဆာ​ပြေစား​သောက်​ကြပါ ခင်​ဗျားလို့ ဘုရားဖူးဦး​ဆောင်​သူ​တွေ ​ဆော်​သြ​တော့ ကား​ပေါ်က​နေ ဆင်းပြီး စား​သောက်​ဆိုင်​ကို ဝင်​လိုက်​ကြတယ်​ ။ အိမ်​သာက အပြန်​စားပွဲကို ဝင်​ထိုင်​​တော့ ဆရာမက ကျွန်​​တော်​တို့နှင့်​စားပွဲတူတယ်​ ။ သူက ကျွန်​​တော့ကို မျက်​​စောင်​ကြီး​တွေသာထိုးပြီး ဘယမှမ​ပြောဘဲ သူ့အ​မေနှင့်​သာ ဟိုဟိုဒီဒီ​ပြော​နေ​တော့တယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​တို့စား​သောက်​တာကို အန်​တီသဇင်​ကရှင်း ​ပေး​တော့ ဆရာမက ​ငွေပြန်​​ပေး​ပေမဲ့ အန်​တီကမယူဘဲ အလှူလုပ်​တာပါလို့သာ ပြန်​​ပြောပြီး ​ပေးလိုက်​တယ်​ ။ ကား​ပေါ်ပြန်​တက်​​ခါနီးမှာ ​ဇော်​​ဇော်​က သူဟာ​စော်​နှင့်​ အဆင်​​ပြေ​နေပြီး ခရီးအဆုံးထိ ​အောင့်​အင်းကာ သူ့အ​မေအနီးမှာဘဲ ​နေပါလို့​ပြောကာ သူ့​စော်​နှင့်​ကား​ပေါ်တက်​သွားတယ်​ ။ကျွန်​​တော်​လည်း ကား​ပေါ်တက်​​တော့ ကားကို ဆက်​​မောင်းပြီး ကားမီကိုမှိတ်​လိုက်​​တော့တယ်​ ။ ကားသွားပြီး ၅ မိနစ်​အကြာမှာ အန်​တီသဇင်​က သား..အိပ်​ပြီလား တိုးတိုး​လေး​မေးလာ​တော့ ကျွန်​​တော်​က မအိပ်​​သေးပါလို့ တိုးတိုး​လေး ​ဖြေလိုက်​တယ်​ ။ သူက ​စောင်​ကို​ခေါင်းက​နေ ခြုံလိုက်​ပြီး ကျွန်​​တော့ရဲ့​ဘောင်းဘီ​ဇေ့ကိုဖွင့်​ကာ ညီ​လေးကို သူ့နုတ်​ခမ်းနှင့်​ကို စုတ်​​ပေးလာ​တော့တယ်​ ။
အစုတ်​ခံဖူးတာမဟုတ်​​တော့ ပါးစပိကို ကိုယ့်​ရဲ့လက်​နှင့်​ ပိတ်​ကာ အသံမထွက်​​အောင်​ကို ကြိုးစားရ​တော့တယ်​ ။ ကြိုးစား​ပေမဲ့လည်း အား..အု..အန်​တီရယ်​.. လို့ ညီးပြီး သူ့ရဲ့​ခေါင်းက ဆံထုံးကို ဆုပ်​ကိုင်​ကာ ​နေလိုက်​ရတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​ပြီးသွား​တော့ ထွက်​သမျှအရည်​​တွေကို ​ထွေးမထုတ်​ဘဲ အကုန်​မျိုချကာ နမ်းလာ​တော့တယ်​ ။ သူ့နှင့်​နုတ်​ခမ်းခြင်းနမ်း​တော့ ကျွန်​​တော့ရဲ့ အရည်​ ညှီစိုစို့ကို ရ​သေးတယ်​ ။ သူက ကျွန်​​တော့ရဲ့နားမှာကပ်​ပြီး ဘုရားဖူးကပြန်​ရင်​ ​အေး​ဆေးတ​နေ့တွေ့ရ​အောင်​ လို့​ပြောလာ​တော့ ဟုတ်​ကဲ့လို့ ပြန်​​ပြောလိုက်​တယ်​ ။ မနက်​ည​တော့ ကား​ပေါ်က​နေ ဆင်းပြီး ဘုရားဖူးကြတယ်​ ။ ည​နေမှဘဲ ပြန်​ခဲ့ကြတယ်​ ။ ကား​ပေါ်​ရောက်​​တော့ အလာတုန်းကလိုဘဲ အန်​တီဟာ ကျွန်​​တော့ရဲ့ညီ​လေးကို ပါးစပ်​နှင့်​စုတ်​​ပေးတယ်​ ။ မြို့ကို ပြန်​​ရောက်​​တော့ ​ဇော်​​ဇော်​က သူ့​စော်​ရဲ့အိမ်​ကို လိုက်​ပို့​ပေးအုံးမယ်​ သူ့ရဲ့ အ​မေကိုလိုက်​ပို့​ပေးပြီး သူ့အိမ်​မှာ​စောင့်​အိပ်​​ပေးပါလို့ ​ပြောကာ ထွက်​သွားတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​နှင့်​အတူ အန်​တီသဇင်​ဟာ သူတို့အိမ်​ကိုသွားလိုက်​ကြတယ်​ ။သူ့အိမ်​ကို သွားတဲ့လမ်းတ​လျှောက်​မှာ ညီ​လေးက အရမ်းကိုတငိးကြပ်​ခဲ့သမျ သူ့အိမ်​တံခါး ကိုဖွင့်​ပြီး အဝင်​ တံခါးကို​စေ့ကာ အန်​တီသဇင်​ကို တံခါးမှာကပ်​ပြီး နမ်းလိုက်​တယ်​ ။ သူရဲ့ထမိန်​ကို​ဖြေချလိုက်​ပြီး သူ့ရဲ့ညီမ​လေးကို ကြည့်​မိတယ်​ ။ အသက်​ ၃၇ နှစ်​ အန်​တီသဇင်​ရဲ့ညီမ​လေးက အ​မွေးထူထူ​တွေကြားထဲက​နေ ကြွကာ​ဖောင်းပြီး ခုံးထွက်​​နေတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း အ​မွေး​တွေကလက်​နှင့်​ဖိပြီး လျှာဖျား​လေးနှင့်​ က​လော်​ကာ​ပေးလိုက်​တယ်​ ။ အန်​တီက ကျွန်​​တော့ရဲ့ဆံပင်​​တွေကို ပွတ်​သပ်​ပြီး အိုး..သားရယ်​.. ​ကောင်းလိုက်​တာကွယ်​..အား.. လို့ ညီးလာတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​ ​ဘောင်းဘီကို ချွတ်​ချလိုက်​ပြိး အန်​တီသဇင်​ကို နံရံမှာကပ်​ပြီး ညီ​လေးကိုသူညီမ​လေး ဆီမှာ​တေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း​ညှောင့်​ကာ သွင်း​ပေးလိုက်​တယ်​ ။ ​စေးပြီးတင်းကျပ်​ ​နေတဲ့သူ့ညီမ​လေးအထဲကို အဆုံးထိ​ရောက်​သွား​တော့ သူ​ခြေတစ်​ဘက်​ကိုမပြီး မတ်​တပ်​ရပိကာ ကြမ်းကြမ်းဘဲ​ဆောင့်​လုပ်​​ပေးလိုက်​တယ်​ ။ သူ့ရဲ့​မေးကို ကျွန်​​တော့ရဲ့ပခုံးမှာတင်​ပြီး အား..​ကောင်းလိုက်​တာ သားရယ်​ ..အား..ရှီး..ကြမ်းကြမ်းကွယ်​ အား.. လို့ ညီးကာ တင်​ပါးကိုလက်​နှစ်​ဖက်​နှင့်​ဆွဲဆွဲကာ ခံ​ပေးတယ်​၂ မိနစ်​အကြာမှာ ကျွန်​​တော်​ဟာ အချစ်​ရည်​​တွေကို သူ့ရဲ့ညီမ​လေးဆီမှာပန်းကာ ပြီးသွားတယ်​ ။
နှစ်​​ယောက်​သားဖက်​ကာ မှိန်​​နေကြပြီး သူက ကျွန်​​တော့ပါးကိုနမ်းကာ သားရယ်​.. သားကို…အန်​တီ​မွေးစားမယ်​ကွာ.. ဒါ​ပေမဲ့လည်း သားရဲ့ သူငယ်​ချင်း..​ဇော်​​ဇော်​ မသိ​စေနဲ့​နော်​ မိုးမီး​လောင်​မှာကွ လို့ တင်းတင်းဖက်​ကာ ​ပြောတယ်​ ။ သူနှင့်​အတူလူချင်းခွာကာ ကျွန်​​တော်​က ​ဇော်​​ဇော်​ရဲ့အိပ်​ရာကို ဝင်​ကာအိပ်​စက်​ သလိုဘဲ အန်​တီလည်း ​ဇော်​​ဇော်​ပြန်​​ရောက်​မှ သူ့ရဲ့အိပ်​ရာဝင်​ကာ အိပ်​စက်​လိုက်​ ​တော့တယ်​ ။ မနက်​မိုးလင်း​တော့ ​ဇော်​​ဇော်​အိမ်​မှာဘဲ မနက်​စာစားကာ အိမ်​ကို ပြန်​ခဲ့တယ်​ ။ ည​နေမှာ ​ဇော်​​ဇော်​က ​ဆေး​ခြောက်​​ရော အရက်​​ရောယူလာ​ပေမဲ့ ကျွန်​​တော်​က မသုံး​တော့ဘူး မင်းဘဲသုံး​တော့ကွာလို့ ​ပြောလြိုက်​တယ်​ ။ သူက သုံးပြီး​မှောက်​​နေ​တော့ သူကိုတွဲကာ သူ့အိမ်​ကိုလိုက်​ပို့​ပေးတယ်​ ။ ပုံမှန်​ဖြစ်​​တော့ လူ​တွေက​တော့ ဒီနှစ်​​ကောင်​က ​ဆေးကွဲပြီး ပြန်​လာပြန်​ပြီလို့ထင်​ကြမှာဘဲ ။ သူ့အိမ်​​ရောက်​​တော့ အန်​တီသဇင်​ဟာ ဆိုင်​ကို​ကောင်​မ​လေး​တွေနှင့်​ထားခဲ့ကာ ကျွန်​​တော်​တို့ဆီ​ရောက်​လာပြီး ​ဇော်​​ဇော်​ကိုအိပ်​ရာ​ပေါ်တင်​​ပေးကြတယ်​ ။ အန်​တီက ကျွန်​​တော်​ကို လက်​နှင့်​သူ့​နောက်​က​နေ လိုက်​လာဖို့ လက်​ဟန်​နှင့်​ ပြ​တော့ သူ့​နောက်​က​နေ လိုက်​သွားတယ်​ ။ သူက သား.. မင်းရဲ့အိမ်​ကို အန်​တီဆီမှာ ​ပေါင်​နှံကာ ​ကျောင်းတက်​တယ်​ လို့သာ ​ဇော်​​ဇော်​ကို ​ပြောထား အန်​တီကသား တက္ကသိုလ်​တက်​ဖို့​ငွေကို ​ထောက်​ပံ့​ပေးမယ်​ သားကလည်း အန်​တီကို လို့ ​ပြောကာ စကားကို ဆုံး​အောင်​မ​ပြောဘဲ နုတ်​ခမ်းခြင်းနမ်းလိုက်​တယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း အန်​တီကိုတင်းတင်းဖက်​ကာ သူ့ရဲ့အခန်းကို​ခေါ်သွား လိုက်​တယ်​ ။ သူ့ကို အိပ်​ကုတင်​​ပေါ်တင်​ကာ သူ့ရဲ့ပန်း​ရောင်​အ​ချောသား ထမိန်​ကိုအ​ပေါ်ကိုလှန်​တင်​ကာ သူ့ရဲ့ညီမ​လေးကို လျှာအပြားလိုက်​ကြီး ကပ်​ကာ ယက်​ပြစ်​လိုက်​တယ်​ ။ အိုး..သားရယ်​..အန်​တီကို စွဲသွား​စေတယ်​ကွယ်​ အား..ရှီး.. လို့ ညီရင်းနှင့်​ ​ခေါင်းကဆံပင်​​တွေကို ပွတ်​သပ်​​ပေးတယ်​ ။ သူက ကျွန်​​တော်​ စုတ်​​ပေးတာကို ရပ်​​စေပြီး ထမိန်​ကိုချွတ်​ချကာ ကုတင်​​ပေါ်မှာလက်​​ထောက်​ ကာ​နေ​ပေးတယ်​ ။ သမင်​လည်​ပြန်​လှည့်​ကြည့်​ပြီး အချိန်​သိပ်​မရဘူး..သားရယ်​.. မြန်​မြန်​လုပ်​​ပေးကွယ်​ လို့ ​ပြောလာတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း သူ့အ​နောက်​က​နေဝင်​ကာ အ​နောက်​ကိုစူကာ ထွက်​​နေတဲ့သူ့ရဲ့ညီမ​လေးဆီမှာ ညီ​လေးကို​တေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းနှင့်​အဆုံးထိကို ​ရောက်​​အောင်​သွင်းလိုက်​​တော့တယ်​ ။ သူ့ရဲ့ခါးကိုကိုင်​ပြီး မ​နှေးမမြန်​​လေး​ဆောင့်​ကာ ​ပေးလိုက်​​တော့ အိုး..သားရယ်​..​ကောင်းတယ်​ကွာ..အား..လုပ်​​ပေးသား..အား.. လို့ညီးကာ ​နောက်​ပြန်​​ဆောင့်​ကာ​ပေးတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း ​ဆောင့်​ချက်​တိုင်း တုံခါပြီး အ​ရှေ့​နောက်​​ပြေး​နေတဲ့ ဝင်းဝါ​နေတဲ့ဖင်​ကြီးကို ကြည့်​ကာ ပိုပြီး​ဆောင့်​ လုပ်​​ပေးမိတယ်​ ။
သူ့ရဲ့ ​ယောက်ျားဆုံးပြီး ၈ နှစ်​​လောက်​အလုပ်​မလုပ်​တဲ့ညီမ​လေး ဟာ ညီ​လေးကို ရစ်​ပတ်​ဝါးမြိုပြီး အသွင်းတိုင်းမှာ ချိုင့်​ဝင်​ကာ အထွက်​မှာလည်း ညီ​လေးကိုရစ်​ပတ်​ပြီး ပြန်​ထွက်​လာတယ်​ ။ အား..သားရယ်​..မြန်​မြန်​ကွယ်​.. အန်​တီပြီး​တော့မယ်​.. အား..ရှီး.. ညီးသံ​လေးနှင့်​ပြန်​​ဆောင့်​​ပေးလာတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း သူ့ရဲ့ခါးကိုကိုင်​ပြီး ကြမ်းကြမ်းနှင့်​မြန်​မြန်​​ဆောင့်​ကာ လုပ်​​ပေး​တော့ သူပြီးသွားတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​ လည်း ​နောက်​ထပ်​အချက်​နှစ်​ဆယ်​​ဆောင့်​ကာ အချစ်​ရည်​​တွေကို ဆည်​ကျိုး သလိုဘဲ ပန်းထည့်​လိုက်​​တော့တယ်​ ။ သူနှင့်​မှိန်းကာ ခဏ္ဏ​နေပြီး​တော့ ကျွန်​​တော်​ ၁၀ မိနစ်​​လောက်​ သူနှင့်​စကား​ပြောပြီး အိမ်​ပြန်​ခဲ့တယ်​ ။ အန်​တီသဇင်​ကို နုတ်​ဆက်​ပြီး အိမ်​ကိုပြန်​လာ​တော့ လမ်းမှာ ဆရာမ​ဒေါ်သင်းသင်းကို သွား​တွေ့တယ်​ ။ သူက ကျွန်​​တော့ကို နုတ်​ခမ်းကိုကိုက်​ပြီး စူးစိုက်​ကြည့်​ပြီး လှည့်​ကာထွက်​သွားတယ်​။ ဆရာမ​နောက်​ကိုလိုက်​သွားပြီး ဆရာမအနီးကို​ရောက်​​တော့ ဆရာမ ကျွန်​​တော်​​တောင်းပန်​ပါတယ်​ဗျာ ဆရာမ ကျွန်​​တော့ကို ခွင့်​လွတ်​ပါလို့​တော့ မ​တောင်းဆိုရဲပါဘူးဗျာ လို့​ပြောကာ လှည့်​ပြီးပြန်​လာခဲ့တယ်​ ။ အိမ်​ကို​ရောက်​​တော့ ဆရာမရဲ့​ဒေါသနှင့်​ကြည့်​တဲ့အကြည့်​က ကျွန်​​တော့ရဲ့နှလုံးသား ကို အစိပ်​စိပ်​အမွှာမွှာ ဆုတ်​ဖြဲလိုက်​သလိုခံစားရတယ်​ ။ ​တက္ကသိုလ်​တက်​ဖို့ ရည်​ရွယ်​ခဲ့​သော်​လည်း ကျွန်​​တော်​ဟာ အ​ဝေးသင်​အဖြစ်​ဘဲ ​ပြောင်းလိုက်​ပါတယ်​ ။ အ​ဝေးသင်​မတက်​ခင်​ အလုပ်​လုပ်​ပြီး ​ငွေစုဖို့အတွက်​ ကြံရွယ်​ပြီး ကျွန်​​တော်​တို့ ​ဆေးချရင်း ရင်းနှီးသွားတဲ့အကိုကြီးကို ​ပြောပြ​တော့ သူက အ​ဆောင်​မှာ​နေပြီး ကုမဏ္ဏီမှာ ဝင်​လုပ်​​နေတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​ကိုလည်း သူကသူ့ရဲ့လူကြီး ကို​ပြော​ပေးမယ်​ လို့ ​ပြောလာ​တော့ သူနှင့်​အတူ ရန်​ကုန်​ကိုသွားဖို့ ဖြစ်​သွားတယ်​။ ရန်​ကုန်​ကို မသွားခင်​မှာ ဆရာမသင်းသင်းဆီကိုသွားပြီး ​နောက်​ထပ်​တစ်​ကြိမ်​​တောင်းပန်​ပြီး ပြန်​ထွက်​လာ​တော့ ဆရာမက ကျွန်​​တော့ကို​ သူ့အိမ်​လာဖို့ ​ခေါ်တယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း သူစာသင်​ပြီး ​အောင်​ လ္ဘက်​ရည်​ဆိုင်​က​နေ​စောင့်​ကာ ဆရာမပြန်​​တော့ သူနှင့်​အတူဘဲ သူ့အိမ်​ကိုလိုက်​သွားတယ်​ ။
ဆရာမအိမ်​ကို​ရောက်​သွား​တော့ ဆရာမအ​မေကလည်း ကျွန်​​တော့ကို တနယ်​တ​ကျေးမှာ လိမ်​လိမ်​မာမာ​နေဖို့ ဆုံးမကာ အိမ်​​နောက်​ဘက်​ကို ဝင်​သွားတယ်​ ။ ဆရာမ ကျွန်​​တော့ကို စိုက်​ကြည့်​ပြီး ​အောင်​​ဇော်​ မင်းရဲ့အပြစိကို မင်းသိလား ​အေး သိရင်​ မင်း​နောက်​ထပ်​ အပြစ်​မရှိ​အောင်​​နေပါ လူတိုင်​က​တော့ မှားတတ်​တယ်​ မင်းမှားတာက အဆိုးဆုံးဘဲ ကဲ့ဒါဘဲ လို့ အသံလှိုင်းတုန်​တုန်​နှင့်​​ပြောကာ အိမ်​ထဲကို ဝင်​သွားတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​ လည်း ဟုတ်​ကဲ့ပါ လို့​ပြောကာ အိမ်​ကိုပြန်​လာထဲ့တယ်​ ။ အိမ်​ကို​ရောက်​ သွား​တော့ ​ဇော်​​ဇော်​က အိမ်​တံခါးဝမှာ ထိုင်​ကာ​စောင့်​​နေတယ်​ ။ သူက သားကြီး မင်းမသွားခင်​ ​နောက်​ဆုံးအ​နေနှင့်​ ချကွာ ငါဝယ်​လာတယ်​ ​ပြောလာတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း အိမ်​တံခါး​တွေဖွင့်​ပြီး ​ဇော်​​ဇော်​နှင့်​ အတူ ​ဆေးသုံးကာ ​နေလိုက်​တယ်​ ။ ​ဇော်​​ဇော်​အိမ်​ပြန်​သွားပြီး မိနစ်​ ၃၀ အကြာမှာ ဆရာမသင်းသင်း​ရောက်​လာပြီး ကျွန်​​တော့ကို သူစုထားတဲ့​ငွေ အချို့ကို​ပေးပြီး ကျွန်​​တော့ကို လိမ်​လိမ်​မာမာ ​နေဖို့ဆုံးမပြီး ပြန်​​တော့ ကျွန်​​တော်​က ဆရာမသင်းသင်းကို လိုက်​ပို့​ပေးပြီး ပြန်​လာခဲ့တယ်​ ။ ဆရာမ​ရှေ့မှာသာ ဟန်​​ဆောင်​ပြီး လူ​ကောင်​​လေးလို​နေပြ ​ပေမဲ့ လမ်းတစ်​ဝက်​​ကျော်​လာ​တော့ ​ခေါင်း​တွေက ရီ​ဝေ​ဝေဖြစ်​လာတယ်​ ။ ​ဆေး​ရောအရက်​​ရော နှစ်​ပင်​လိမ်​​နေတာ အရှိန်​​တွေက တရစ်​ရစ်​တက်​လာတယ်​။ အနီးနားကိုကြည့်​​တော့ ​ဇော်​​ဇော်​တို့အိမ်​​ရှေ့ကို ​ရောက်​​နေတာနှင့်​ သူ့အိမ်​ကို တန်းဝင်​ပြီး ​ဇော်​က​ဇော်​ကို​ခေါ်​တော့ အဲ့​ကောင်​က ကျိုး​နေတာများ နိုးလို့ကို မနိုး​တော့ဘူး ။ သူ့ရဲ​ဘေးက ဒရင်းဘတ်​ကိုချကာ အိပ်​လိုက်​တယ်​ ။အန်​တီ သဇင်​​ရောက်​လာပြီး အ​ခြေ​နေကို သိသွား​တော့ သံပုရာရည်​နှစ်​ခွက်​​ဖျော်​ကာ တိုက်​တယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​က ​သောက်​နိုင်​​ပေမဲ့ ​ဇော်​​ဇော်​က​တော့ တစ်​ငုံ​သောက်​ ပြီး ပြန်​ကျိုးသွားတယ်​ ။ ​ဇော်​​ဇော်​က အရက်​​သောက်​ရင်​ တံ​တွေးမ​ထွေးဘဲ အာ​ကောင်းတယ်​ကွာ လို့​ပြောပြီး ​သောက်​တတ်​သူ တစ်​​ယောက်​က တစ်​ခွက်​​သောက်​ရင်​ သူကသူများ ထက်​ပိုပြီး တစ်​​ကျော်​​ကျော်​​သောက်​ရမှ ​ကျေနပ်​တဲ့​ကောင်​ ပြီး​တော့ ​ဆေးချရင်​ သူများ​တွေ ​ဆေးလိပ်​တစ်​လိပ်​စာ ​သောက်​ရင်​ သူက နှစ်​လိပ်​စာ​သောက်​ရမှ ​ကျေနပ်​တဲ့​ကောင်​ဗျ ။
စိတ်​ရင်းက​တော့ အရမ်းကို​ကောင်းတယ်​ ။ ဒီ​နေ့လည်း ​ဆေးနည်း​တော့ အရက်​တစ်​လုံးဝယ်​ကာ ​သောက်​တာသူက တစ်​ပိုင်း​ကျော်​ ​သောက်​ပြီး ​မှောက်​​နေတာ​လေ ။ ဖွန်​​ကြောင်​ချက်​ကလည်း အဲ့လိုပါဘဲဗျာ တစ်​လမ်းထဲမှာကို သုံး​ယောက်​အနည်းဆုံး ​ကြောင်​တယ်​ ။ ​စော်​​တွေကလည်း သူ့ကိုဆိုရင်​ လက်​ခံကြတာဘဲ ။ ​ဟေ..​ဟေ.. ဒါ​ပေမဲ့ ရုပ်​​ဖြောင်​တာနှင့်​ ​ဘောဒီ ​တွေက သူကျွန်​​တော့ကို မမှီဘူး ။ သူ​ကောင်​မ​လေးနှင့်​ သွားချိန်​တဲ့​နေ့​တွေဆိုရင်​ ကျွန်​​တော်​က ​စောင့်​​ပေးရတယ်​ ။ သူနှင့်​အတူ ​ကျောင်းက သူငယ်​ချင်​မ​လေး နှင်းဆီဆိုရင်​ သူအလိုရှိတိုင်းကို​ကျွေး သူစိတ်​တိုင်းကျ​နေ​ပေးပြီး ချစ်​တတ်​သူ ။ သူတို့နှစ်​​ယောက်​ဟာ ကျွန်​​တော်​တို့မြို့ ရဲ့အပြင်​က အိမ်​ပျက်​ထဲမှာချိန်း​တော့ ကျွန်​​တော်​လည်း သူတို့အတွဲကို​ချောင်းမိတယ်​ ။ အဲ့​နေက နှင်းဆီကို သူက သူ့ညီ​လေးကိုစုတ်​ခိုင်​ပြီး နှင်းဆီရဲ့ စကပ်​​လေးကို ခါးထိလှန်​ကာ အ​နောက်​က​နေ လုပ်​လိုက်​တာ နှင်းဆီက ​နေ​လောင်​တဲ့ပန်းလိုဘဲ မျက်​နှာ​တွေနီရဲ့ပြီး ၁၀ မိနစ်​​လောက်​ အနားယူလိုက်​တယ်​ ။ သူက​တော့ ​ဆေး​ပေါ့လျပ်​ထဲမှာ ​ဆေး​ခြောက်​ ထည့်​ပြီး ရှုလိုက်​​သေးတယ်​ ။ သူတို့ပြန်​ထွက်​လာ​တော့ နှင်းဆီကိုပိုပြီး ကျွန်​​တော့အိမ်​မှာ ထပ်​ပြီး ​ဆေးချကြတယ်​ ။သူတို့အ​ကြောင်းကို​တွေးမိပြီး လူကသာ မှိုင်းမှိုင်းဖြစ်​​နေ​ပေမဲ့ ညီ​ဘေးက​တော့ လန်းဆန်းတက်​ကြွစွာဘဲ ​ခေါင်း​ထောင်​​နေတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း ​ရေအိမ်​သွားကာ ​ရေးပန်းပြီး ထွက်​ခါနီမှာ အန်​တီသဇင်​က ဝင်​လာပြီး ကျွန်​​တော့ကို လိုက်​ရှာ​နေတယ်​ ​ပြောကာ သူ့ရဲ့အခန်းကို​ခေါ်သွားတယ်​ ။ သူ့အခန်းကို​ရောက်​​တော့ သူ့နှင့်​အတူ ဖက်​ကာနမ်းလိုက်​ကြတယ်​ ။ ​ဇော်​​ဇော်​တို့အတွဲအ​ကြောင်းကို စဉ်းစား မိလို့ ​ခေါင်း​ထောင်​​နေတဲ့ ညီ​လေးဟာ အန်​တီသဇင်​ရဲ့ ဗိုက်​ကိုသွား​ထောက်​တယ်​ ။ အန်​တီသဇင်​က နုတ်​ခမ်းချင်းနမ်းပြီး ညီ​လေးကို ​ဘောင်းဘီ​ပေါ်က​နေ ပွတ်​သပ်​ကာ လုပ်​​ပေးတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း အရမ်းတင်းလာပြီးမို့ သူ့ကို ကုတင်​​ပေါ်တင်​ပြီး သူ့ရဲ့ထမိန်​ကို ခါးထိ​ရောက်​​အောင်​ လှန်​တင်​ကာ သူ့ရဲ့ညီမ​လေးကို လျာအပြားလိုက်​ ကပ်​ပြီးယက်​ပြစ်​လိုက်​တယ်​ ။
သူဆီက​နေ ​ကျေနပ်​အားရတဲ့ ညီးသံ​လေးထွက်​လာပြီး သူကထကာ သူ့ရဲ့အဝတ်​အစား​တွေကို မြန်​မြန်​ချွတ်​ပြီး ကုတင်​​ပေါ်မှာ ပက်​လက်​ ​နေ​ပေးတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း သူ့အ​ပေါ်က​နေ ​မှောက်​ချလိုက်​ပြီး ညီ​လေးကို သူ့ညီမ​လေးဆီမှာ​တေ့ကာ အဆုံးထိ​ဆောင့်​ကာ သွင်းလိုက်​တယ်​ ။ အိုး..သားရယ်​.. ကြမ်းလိုက်​တာကွာ..ဖြာ်းဖြည်းကွယ်​ လို့ ​ပြောတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း သူ့နုတ်​ခမ်းကိုနမ်းပြီး ညီ​လေးညီမ​လေးကိုထိကပ်​ပြီး ​ညှောင့်​ကာ လုပ်​​ပေးလိုက်​တယ်​ ။ ​နောက်​​ကျော့ကို တင်းတင်းဖက်​ကာ ​အောက်​က​နေ လှုပ်​လှုပ်​ကာ လုပ်​​ပေးတယ်​ ။ ​ဆေး​ရော အရက်​​ရော အရှိန်​​တွေနှင်​မို့ သူ့ကို ကပ်​ပြီး​ညှောင့်​ကာ ၁၀ မိနစ်​​လောက်​လုပ်​​ပေးပြီးမှာ သူဟာ တစ်​ကြိမ်​ပြီးသွားလို့ ​နောက်​ထပ်​တစ်​ကြိမ်​ ပြီးချင်​လာတယ်​ ​ပြောလာတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​က သူ့ကိုဆွဲထူပြီး ကုတင်​​ဘောင်​ကို ကိုင်​ကာ လက်​​ထောက်​​နေ​စေတယ်​ ။ သူ့ရဲ့အ​နောက်​က​နေ သူ့ဖင်​ကြီးညှပ်​ကာ ကြမ်းကြမ်း​ဆောင့်​လုပ်​​ပေးလိုက်​တယ်​ ။ အား…သားရယ်​…မြန်​မြန်​..အား.အန်​တီပြီးပြီ..အား… ​ပြောကာ သူ့ရဲ့လက်​ ​တွေဟာ အား​ပျောသွားတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း သူ့ကို ဒူး​ထောက်​ပြီး ကျွန်​​တော့ကို မှီ​စေပြီး သူ့ကိုကပ်​ကာ ​နောက်​ထပ်​ အချက်​ ၃၀ ကြမ်းကြမ်း​ဆောင့်​လုပ်​ကာ ပြီးသွားတယ်​ ။ သူနှင့်​အတူဘဲ ကုတင်​​ပေါ်မှာ ဖက်​ပြီး မှိန်​ကာ​နေလိုက်​ကြတယ်​ ။ သူ အ​မော​ပြေသွားမှ ကျွန်​​တော့ကို စိုက်​ကြည့်​ပြီး ​မောင်​..မမရဲ့​မောင်​ လို့ တိုးတိုး​လေး​ခေါ်တယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​သူ့ကို ဆွဲပြီး ပြန်​​ပြောပါအုံးလို့ ​ပြောလိုက်​​တော့ ကျွန်​​တော့ရဲ့နားမှာကပ်​ပြီး မမရဲ့​ယောက်ျား မမရဲ့​မောင်​.. ​မောင်​..​မောင်​..​မောင်​ လို့ ကြားပြီးလား လို့ ရှက်​ပြုံး​လေးနှင့်​​ပြောလာတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​ကလည်း ကြားပါတယ်​ မမလို့​ပြောပြီး သူ့ပါးကိုနမ်းကာ မျက်​လုံးမှိတ်​လိုက်​​တော့ ကျွန်​​တော့ရဲ့မျက်​လုံးထဲမှာ ကျွန်​​တော်​ ရန်​ကုန်​ကိုသွားဖို့အတွက်​ စုထားတဲ့​ငွေကို လာ​ပေးတဲ့ ဆရာမသင်းသင်းကို မြင်​​ယောင်​ သွားတယ်​ ။ အန်​တီသဇင်​နှင့်​အတူ အိပ်​ရာမှထပြီး ည ၁ နာရီ​ကျော်​မှာ အိမ်​ကို ပြန်​ခဲ့တယ်​ ။
အိမ်​ကို​ရောက်​​တော့ အိမ်​စာချုပ်​ကို စာအိပ်​မှာထည့်​ပြီး ခရီး​ဆောင်​ အိပ်​မှာ အဝတ်​အစား​တွေကို ထည့်​ပြီး စဉ်းစားရင်း ​နေလိုက်​ပါ​တော့တယ်​ ။မနက်​ ၅ နာရီထိုး​တော့ အထုတ်​ကိုဆွဲပြီး ဆရာမသင်းသင်းရဲ့အိမ်​ကို သွားပြီး ဆရာမကို ​ခေါ်လိုက်​ပါတယ်​ ။ အိပ်​ရာက​နေတန်းပြီးထလာတဲ့ ဆရာမသင်းသင်းရဲ့မျက်​နှာက တကယ်​ကို အပြစ်​ကင်းစင်​​နေတယ်​ ။ သူက ဘာကိစ္စရှိလဲလို့ စကားသံပြတ်​ပြတ်​ ​ပြော​တော့ ကျွန်​​တော်​က ဆရာမလက်​ကိုဆွဲပြီး ကျွန်​​တော့ရဲ့အိပ်​စာချုပ်​နှင့်​အိမ်​​သော့ ကို ဆရာမလက်​ထဲကို အပ်​ကာ အရာရာအားလုံးအတွက်​ ​နောက်​ထပ်​တစ်​ကြိမ်​ ​တောင်းပန်​ပါရ​စေ မသင်းကျွန်​​တော်​​လေ မသင်းကို အရမ်းချစ်​မိသွားပါတယ်​ ဒါက​တော့ အိပ်​စာချုပ်​နှင့်​ အိမ်​​သောပါ မသင်းအတွက်​ ကျွန်​​တော်​​နောက်​ဆုံးလက်​​ဆောင်​ပါ လို့ ​ပြောကာ ​ပေးပြီး ထွက်​လာခဲ့တယ်​ ။ ဆရာမရဲ့ ​ခေါ်သံကိုကြား​ပေမဲ့ သူ့ဆီက​နေ အရမ်းမုန်းတယ်​ ဆိုတဲ့စကားကို လက်​ခံနိုင်​စွမ်းမရှိ​တော့ လှည့်​မကြည့်​ဘဲ ထွက်​လာခဲ့တယ်​ ။ ကားဂိတ်​ကို​ရောက်​​တော့ ကားမထွက်​ခင်​မှာ ​မွေးရပ်​​မြေမြို့​လေးကို ခဏ္ဏကြည့်​ပြီး ကား​ပေါ်တက်​လိုက်​​တော့တယ်​ ။ ရန်​ကုန်​ကို​ရောက်​​တော့ ကို​ဂျော်​နီ​ပေးတဲ့လိပ်​စာ အတိုင်းဘဲ သွားလိုက်​တယ်​ ။ သူရဲ့ အ​ဆောင်​ရှင်​မိန့်​မက ကို​ဂျော်​နီက ကြိုပြီး​ပြောထား​ပေးလို့ ​ပြောကာ ကို​ဂျော်​နီနှင့်​အတူ ​နောက်​တစ်​​ယောက်​ရှိတဲ့အခန်းကို ပြ​ပေးတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း အခန်းမှာ အထုတ်​ကို ချပြီး အိပ်​စက်​လိုက်​​တော့တယ်​ ။ ည​နေပိုင်း ကို​ဂျော်​နီအလုပ်​ကပြန်​လာ​တော့ သူရဲ့လူကြီး ကို​ပြောပြီးပြီ အ​ရောင်​ဝန်းထမ်း အဖြစ်​နှင့်​သွင်း​ပေးမယ်​လို့ သူက​ပြော​တော့ ဝမ်းသာသွား တယ်​ ။ ​နောက်​​နေ့မနက်​မှာ သူနှင့်​အတူ သူ့တို့ရဲ့ ကုမဏ္ဏီကိုလိုက်​သွားတယ်​။ အင်​တာဗျူ ​ဖြေ​တော့ လစာကနည်းတယ်​ ။ အခု​လော​လောဆယ်​မှာ​တော့ စား​ရေး​သောက်​​ရေးတွက်​ အဆင်​​ပြေ​အောင်​လုပ်​ရမှာဘဲ ​တွေးကာ ဝင်​လုပ်​ပါတယ်​ ။ အလှကုန်​နှင့်​ စား​သောက်​စရာ ​ရောတင်​ပြီး ကားတစ်​စီးနှင့်​ ရန်​ကုန်​မြို့တွင်းကို လှည့်​ပတ်​ကာ ​ရောင်းရတာမို့ ဝယ်​သူ ​တွေနှင့်​ ကုန်​စုံဆိုင်​​တွေကို ဝင်​ပြီး ​ရောင်းရတယ်​ ။ အလုပ်​အစမှာ​တော့ စကား​ပြောရမှာ အမတန်​ရှက်​​ပေမဲ့လည်း တစ်​ပတ်​အကြာမှာ​တော့ စကား​တွေ​ပြောကာ ​ရောင်းတတ်​လာတယ်​ ။
ကို​ဂျော်​နီရဲ့သင်​​ပေးမူ​ကြောင့်​ ​တော်​ကီ​တွေ ပွားတတ်​လာတယ်​ ။ အန်​တီအရွယ်​ကို မမ​ပြောကာ​ရောင်း ၊ အဘွားအရွယ်​ဆိုရင်​ ကြီးကြီး ​ပြော​ရောင်း သူက အ​ရောင်းပိုင်း​တွေကို သင်​​ပေးတယ်​ ။ ကို​ဂျော်​နီက ကျွန်​​တော်​တို့ရဲ့ စူပါဘိုင်​ဆာက​နေ ​နောက်​ကုမဏ္ဏီကို မန်​​နေဂျာနှင့်​​ပြောင်းသွားတယ်​ ။ ကျွန်​​တော့ကိုသူက သူအဆင်​​ပြေရင်​ သူ့အလုပ်​ကို ​ခေါ်မယ်​လို့​ပြောကာ အ​ဆောင်​ပါ​ပြောင်းသွားတယ်​ ။ ကို​ဂျော်​နီ​ပြောင်းသွား​တော့ ကျွန်​​တော့ရဲ့လစာက ကျွန်​​တော့အတွက်​ မ​လောက်​ငှတဲ့ ဒဏ်​ကို ခံလာရတယ်​ ။ အ​ဆောင်​မှာလည်း အ​ဆောင်​ခ​ငွေ ၂ လစာ မ​ပေးနိုင်​ဘူးဖြစ်​လာ ခဲ့တယ်​ ။ အစား​သောက်​အတွက်​က​တော့ သိပ်​မပူရဘူး ထမင်းဆိုင်​က အန်​တီကအရမ်းကို သ​ဘော​ကောင်းတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​ရဲ့​ငွေမ​လောက်​မူကို သိ​တော့ သူက အ​ဆောင်​ဖို့​ငွေ နှစ်​လစာကို ထုတ်​​ပေးတယ်​ ။ သူက အ​ဆောင်​မ​နေချင်​ရင်​ သူရဲ့အိမ်​မှာလာ​နေပါလို့ ​ပြော​တော့ ကျွန်​​တော်​ဟာ အ​ဆောင်​ဖို့​တွေရှင်းပြီး သူ့ရဲ့အခန်းကို​ပြောင်​သွားတယ်​ ။ ထမင်းဆိုင်​ရှင်​ အန်​တီက ​ဒေါ်လှလှပါ ။ သူက သားသမီးနှစ်​​ယောက်​ရှိပြီး တစ်​​ယောက်​က ကျွန်​​တော့ထက်​ နှစ်​နှစ်​ကြီးပြီး ​နောက်​တစ်​​ယောက်​က နှစ်​နှစ်​ငယ်​တယ်​ ။ သူ​ယောက်ျားက အရက်​ဒဏ်​​ကြောင့်​ ဆုံးတာ သုံးနှစ်​ကြာပြီးဆိုတာကို သိခဲ့ရတယ်​ ။ အန်​တီလှလှရဲ့သား အငယ်​​ကောင်​​လေးက ကိုးတန်း​ဖြေပြီးလို့ ဆယ်​တန်းတက်​​တော့မှာ သူ့ကိုစာ​တွေရှင်းပြ စာသင်​​ပေး​တော့ သူနှင့်​ရင်းနှီးလာတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​က ကုန်​ပဏ္ဏီမှာ အလုပ်​လုပ်​ပြီး ပြန်​လာရင်​ ထမင်းဆိုင်​မှာဝင်​ကူကာ လုပ်​​ပေးတယ်​ ။ အန်​တီကဟင်းခတ်​​နေတုန်းမှာ ကျွန်​​တော်​ကပုဂံ​တွေကိုသယ်​ပြီး အတွက်​အဝင်​မှာ သူ့ရဲ့တင်​ပါးကြီး​တွေကို ညီ​လေးက ပွတ်​တိုက်​သွားတာ​တွေရှိတယ်​ ။ လမ်းဝက ကျဉ်း​တော့လည်း အထိအ​တွေက ပိုများတယ်​။ တ​နေ့​တော့ သူ့ရဲ့သားအငယ်​ကလည်း သူငယ်​ချင်း​တွေနှင့်​ ​ခေါင်းသာကို ​ပျော်​ပွဲစားထွက်​ သွားတယ်​လ။ ဆိုင်​က တနင်္ဂ​နွေ​နေ့ဆိုရင်​ အ​ရောင်​ပါး​တော့ အလုပ်​လည်းနည်းတယ်​။ အဲ့​တော့သူက ၂ ညအိပ်​လိုက်​သွားတယ်​ ။
အဲ့ဒီ​နေ့ကစ​နေ​နေ့ ဆို​တော့ ရုံးကပြန်​လာ​တော့ အန်​တီလှလှဟာ အလုပ်​​တွေအရမ်းများ​နေတယ်​ ။ သူအလုပ်​များ​တော့ ကျွန်​​တော်​လည်း အဝတ်​အစား​တွေလှဲကာ အမြန်​ပြန်​ထွက်​လာကာ ကူ​ပေးတယ်​ ။ အဝင်​အထွက်​တိုင်းမှာ ပွတ်​ထိုက်​ပြီး တစ်​ခါတစ်​ခါ ရင်​ချင်းကပ်​ကာ​ရှောင်​ရတယ်​ ။ ညီ​လေးက အရမ်းကိုတင်းပြီး ​ခေါင်း​ထောင်​လာခဲ့တယ်​ ။ အတွင်းခံကလည်း အ​ပေါ့စားဆို​တော့လည်း ညီ​လေးက ​ဘောင်​ဘီထဲက​နေ​ဖောက်​ထွက်​မတတ်​ဖြစ်​​နေတယ်​ ။ လူ​တွေလည်း ရှင်းသွား​တော့ ဆိုင်​ကိုပိတ်​ပြီး အခန်းကိုပြန်​ကာ အဝတ်​အစားလှဲပြီး ​ရေချိုးခန်းကို သွားလိုက်​တယ်​ ။အန်​တီလှလှလည်း ထမိန်​ကိုရင်​သျားပြီး ​ရေချိုးဖို့အသွား သူနှင့်​ဆု့​တော့ သူ့ကိုအရင်​ချိုးခိုင်းပြီး Dvd ဖွင့်​ကာကြည့်​​နေလိုက်​တယ်​ ။ ဇတ်​ကားက ​သွေးစုတ်​ဖုတ်​​ကောင်​ ဇတ်​ကားဆို​တော့ ချစ်​ခန်း​တွေအနည်းကျဉ်းပါတာ​ပေါ့ဗျာ ။ အန်​တီ လှလှထွက်​လာ​တော့ ထမိန်​က​ရေစို​နေ​တော့ အသားမှာကပ်​​နေတယ်​ ။ လှုပ်​လှုပ်​ရှားရှား လုပ်​​နေသူမို့ ခန္ဒာကိုယ်​အချိုးစားက ဂျင်းသွားကာ ကစားမလိုဘဲ ကျစ်​လစ်​​နေတယ်​ ။ အသားကလည်း အဖြူ​ရောင်​မဟုတ်​ဘဲ ဝင်းဝါတဲ့ဘက်​ကို​ရောင်​​နေ​တော့ အနီ​ရောင်​ထမိန်​ ပါးပါးနှင့်​ အရမ်းကိုလှ​နေ​တော့တယ်​ ။ သူကိုစိုက်​ကြည့်​မိသွားတယ်​ ။ သူကလည်းပြုံးပြီး သားရယ်​ ရပြီ ​ရေသွားချိုး​တော့လို ​ပြောမှဘဲ အသိဝင်​ကာ ​ရေချိုးခန်းကိုဝင်​ပြီး ​ရေစိမ်​ကာချိုးလိုက်​တယ်​ ။ မျက်​လုံးထဲမှာ​တော့ အန်​တီလှလှရဲ့ခန္ဒာကိုယ်​က စွဲ​နေတယ်​ ။ ​ရေချိုးပြီး အဝတ်​အစားလှဲကာထွက်​လာ​တော့ အန်​တီလှက ထမင်းပွဲပြင်​ပြီးပြီမို့ သူနှင့်​ အတူထမင်းစားလိုက်​တယ်​ ။ ဟင်း​တွေထည့်​​ပေး​တော့ အ​ရှေ့ကိုနည်းနည်းကုံးကာ ထည့်​​ပေး​တော့ အင်္ကျီလည်​ဟိုက်​က သူ့ရဲ့နို့​တွေကိုမြင်​​နေရတယ်​ ။ အ​ပေါ်ကထမင်း စား​နေသလို မျက်​စိကလည်း အစာစား​နေ​တော့ ​အောက်​ကညီ​လေးဟာ တင်းပြီး​တော့ ​ခေါင်း​ထောင်​လာတယ်​ ။
ညအိပ်​ခါနီမို့ အတွင်းခံ​ဘောင်းဘီဝတ်​ထား​တော့ ပုဆိုးထဲက​နေ ​ငေါ့ကာ ထွက်​​နေ​တော့ ထမင်းစားပြီး​ပေမဲ့ မထရဲဘူးဖြစ်​​နေတယ်​ ။ အန်​တီမမြင်​​အောင်​ အသာ​လေး ​နောက်​ကိုကုံးကာထပြီး သူမမြင်​ဘက်​ကို​ရောက်​မှဘဲ ကိုယ်​ဆန့်​ကာ ပုဂံကို ​ဆေး​ကြောပြီးမှ အိမ်​သာထဲကိုဝင်​ပြီး ညီ​လေးကို ပုဆိုးစည်းတဲ့ကြားမှာ ညှပ်​ကာပြန်​ပြီး ထွက်​လာ​တော့တယ်​ ။ အန်​တီလည်း စား​သောက်​ပြီး ​ဆေး​ကြောကာ အိမ်​​ရှေ့ခန်းက TV ​ရှေ့ထိုင်​ကာ ဇတ်​ကား​ခွေ ထည့်​ကာကြည့်​ကြတယ်​ ။ ဇတ်​ကားကလည်း နိုင်​ငံခြားကားမို့ ဟာသ အက်​ရှင်​​ပေမဲ့လည်း ဇတ်​ကားအစမှာကို တန်းပြီးပါလာတာဗျ ။ ဗိုင်းရပ်​စ်​ပိုး​တွေ မပြန့်​​အောင်​ကာကွယ်​တဲ့ ဇတ်​ကား အဲ့ဇတ်​ကားမှာ ဘွိုင်​ကာမင်းသားက လူဆိုးဘဲ ညီအကိုနှစ်​​ယောက်​က ဒုံကျည်​​တွေကိုဖင်​မှာ စွပ်​ပြီး အပြစ်​ခံကာ ကာကွယ်​လိုက်​ရတဲ့ကား​လေ ။ ဇတ်​ကားအစမှာ စပြိန်​​မွေယာဝယ်​တာကို လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​က ​မွေ့ယာ​ပေါ်တက်​​ဆော်​ပြီးစမ်းတာ​လေ ။ နဂိုကတည်းက ညီ​လေးကို ​ခေါင်းမ​ထောင်​​အောင်​ ပုဆိုးကြားမှာစည်းထားတာ ညီ​လေးက​ပျောပြီး ပြန်​ကျ​တော့မှထပ်​ပြီး ဖန်​သားပြင်​မှာ မြင်​ရပြီးအသံ​တွေပါထွက်​လာ​တော့ ပုဆိုးကြားက​နေ ပြန်​​ထောင်​လာခဲ့တယ်​ ။ ကင်​ထရိုးကိုထယူပြီး ​ကျော်​ဖို့ကလည်း ညီ​လေးက ပုဆိုးထဲက​နေ​ငေါ့ထွက်​​နေပြီ ။ အန်​တီလှ ကလည်း ဒီအတိုင်းဘဲ ထိုင်​ကြည့်​​နေတယ်​ ။ သူကရယ်​ပြီး ကျွန်​​တော့ကိုကြည့်​​တော့ ပုဆိုး ထဲက​နေ​ငေါ့ထွက်​​နေတဲ့ ညီ​လေးကိုမြင်​သွားပြီး ဟိုဘက်​ပြန်​လှည့်​သွားတယ်​ ။ ကျွန်​​တော့လည်း စိတ်​ရိုင်း​တွေဝင်​လာပြီး ​ဘေးက​နေထိုင်​​နေတဲ့ အန်​တီလှကိုဖက်​ကာ နမ်းလိုက်​​တော့တယ်​ ။ သူ့ဆီက​နေ ငြင်းဆန်​မူမရှိဘဲ ​နေ​တော့ ပိုဆိုးကာ သူ့ကိုနုတ်​ခမ်း နမ်းကာ သူ့နို့​တွေကို​ချေ​ပေးလိုက်​တယ်​ ။ ​ပြောပြီးမ​နေဘဲ အိအိ​လေးနှင့်​တင်းတင်း​လေး ဖြစ်​​နေတာကိုင်​လို့အရမ်း​ကောင်းတယ်​ ။ က်ှန်​​တော့ရဲ့အနမ်းကိုသူကလည်း ပြန်​ပြီး​တော့ ကျွန်​​တော့ကိုဖက်​ကာ တုံပြန်​လာခဲ့တယ်​ ။
ဇတ်​ကားက ဒီအတိုင်းဖွင့်​ပြီး အချိန်​ကြာကြာ ​လေးနမ်းပြီးမှ အန်​တီကအနမ်းရပ်​ကာ အခန်းထဲကိုဝင်​သွားတယ်​ ။ သူအခန်းထဲကိုဝင်​ သွား​တော့ ကျွန်​​တော်​လည်း ဒီအတိုင်​ထိုင်​ကာ ကျန်​ခဲ့ပြီး လိုက်​သွားရ​ကောင်းနိုး ထိုင်​​နေရ ​ကောင်းနိုးဖြစ်​​နေခဲ့တယ်​ ။ ​နောက်​​တော့ မထူးပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ်​ရိုင်းကဝင်​ပြီး Tvနှင့်​စက်​ကို ပိတ်​ကာ သူ့အခန်းကိုလိုက်​သွားတယ်​ ။ အခန်းထဲမှာ သူက တံခါးကို​ကျော​ပေးပြီး​တော့ လှဲ​လျောင်​ပြီး အသက်​ပြင်းပြင်းရှုသံကို ကြား​နေရတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း အဝတ်​အစား​တွေကိုချွတ်​ပြီး သူ့ရဲ့အ​နောက်​က​နေဖက်​ပြီး လှည့်​ကာ သူ့နုတ်​ခမ်းကိုနမ်းလိုက်​တယ်​ ။သူကလည်းပြန်​ဖက်​ပြီး မျက်​လုံးမှိတ်​ကာ ပြန်​ပြီး​တော့ အနမ်းကိုတုံ့ပြန်​လာတယ်​ ။ သူ့ရဲ့ထမိန်​ကို​ဖြေချလိုက်​ပြီး လက်​နှင့်​သူ့ရဲ့ညီမ​လေးကို ကစား​ပေးလိုက်​တယ်​ ။ သူ့ရဲ့အင်္ကျီကိုချွတ်​ပြီး သူ့ရဲ့နို့​တွေကိုစို့ကာ ​ချေ​ပေးလိုက်​​တော့ အား… ​အောင်​​ဇော်​ရယ်​…အား..ရှီး.. လို့ တိုးတိုး​လေးညီးကာ ​ခေါင်းကဆံပင်​ကို ပွတ်​သပ်​​ပေးတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​လည်း သူ့အ​ပေါ်က​နေ​မှောက်​ချပြီး သူ့​ပေါင်​ကိုကားကာ ပြုပြင်​ပြီး ညီ​လေးကိုသူ့ရဲ့ညီမ​လေးဆီမှာ ​တေ့ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်းလိုက်​တယ်​ ။ အသက်​ကြီးပြီးမပျက်​စီး​သေးတဲ့ အန်​တီလှရဲ့ညီမ​လေးက တင်းပြီးကျပ်​​နေတယ်​ ။ အား..​အောင်​​ဇော်​ရယ်​…အား.. လို့ မျက်​လုံးမှိတ်​ပြီး ညီးလာတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​ သူ့ကို နုတ်​ခမ်းကိုနမ်းပြီး မြန်​မြန်​လုပ်​ကာ အချစ်​ရည်​​တွေကို သူ့အထဲကိုပန်းထည့်​ပြီး ပြီးသွားတယ်​….ပြီးပါပြီ။
ည ၁၁ နာရီကျော်နေပြီ….. အိပ်ယာထဲမှာ ဘယ်ညာ လူးလိမ့်ရင်း အိပ်လို့မရနိုင် ဖြစ်နေသည်….. လက်တဖက်မှ ယောင်ယမ်းကာ ရင်နှစ်မွှာကို ပွတ်သပ်နေမိသည်… သက်ပြင်းမောများချကာ ကြိတ်မှိတ်၍ ခံစားနေရသည်….လျော့တိလျော့ရဲ ထမီအောက်မှ ဖားပေါင်စင်းတစ်ကောင် လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ ပေါင်နဲ့ ပွတ်မိနေပြန်သည်…. ငိုချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာမိသည်… ဒီခံစားချက်ရဲ့ အထွဋ်ထိပ်ကို သူမခံစားဖူးသည်.. ယ္ခုတစ်ယောက်ထဲ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ ဆိုတာ ရာနှုန်းပြည့်မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာသိ၍ ခံစားနေရ၏.။ သူ့နာမည်က မသန္တာချိုနွယ်……. သူမရဲ့ချစ်လှစွာသောအမျိုးသားမှာ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှ လက်ထပ်ပြီး တစ်ပတ်ကျော်မှာပဲ အမှတ်တမဲ့ ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်… ဆေးစစ်ချက်တွေအရ အသည်းတစ်ခြမ်းကြီးနေလို့ ဟု ဆိုသည်…….အခုမှ အိမ်ထောင်ကျခါစ ., ကာမသွေးတွေ ဆူနေတုန်း …. ယွစိယွစိနဲ့ ပိုးလေးတွေကို ဆွပေးခဲ့သလိုပဲ.. သူအတွက်တော့ ညအိပ်ယာဝင်တိုင်း ကန်သူမဲ့ နေတဲ့ […]